မျက်စိကုဖို့နဲ့ အိမ်ငှားဖို့အတွက် စုထားတဲ့ ရှိစုမဲ့စုပိုက်ဆံလေးတွေကိုမှ အခိုးခံလိုက်ရတဲ့ အဘိုးနဲ့အဘွားရဲ့စိတ်မကောင်းစရာအဖြစ် – စွယ်စုံသုတ
မျက်စိကုဖို့နဲ့ အိမ်ငှားဖို့အတွက် စုထားတဲ့ ရှိစုမဲ့စုပိုက်ဆံလေးတွေကိုမှ အခိုးခံလိုက်ရတဲ့ အဘိုးနဲ့အဘွားရဲ့စိတ်မကောင်းစရာအဖြစ်
ဒီကာလမှာတော့ ပြည်သူတွေအားလုံး အခက်အခဲတွေကိုယ်စီ ရင်ဆိုင်နေရပြီး စားဝတ်နေရေး ပြေလည်ဖို့အတွက်တောင် အနိုင်နိုင်ဖြေရှင်းနေရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အထူးသဖြင့် သာမန်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ အရင်ကထက် ပိုအခက်တွေ့နေကြပြီး ဒုက္ခမျိုးစုံကို ခါးစည်းခံနေရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုအခြေအနေမှာပဲ ခိုးဆိုးလုယက်သူတွေလည်း ပေါများလာတာကြောင့် ပြည်သူတွေ သတိထား နေထိုင်နေရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အခုလည်း ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ အဘိုးနဲ့အဘွားဆီကနေ ရှိစုမဲ့စု ပိုက်ဆံလေးတွေကို ခိုးသွားတဲ့သူကြောင့် ပြည်သူတွေဒေါသထွက်နေရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပုံထဲက အဘိုးနဲ့အဘွား လင်မယားကတော့ သားသမီးတွေဆုံးပါးသွားတာကြောင့် နှစ်ယောက်တည်းဘဝကို ရုန်းကန်ဖြတ်သန်းနေရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အဘိုးက မျက်စိတစ်ဖက် တိမ်ဖုံးနေတာကြောင့် ကောင်းကောင်းမမြင်ရသလို အဘွားကလည်း ကိုယ်တစ်ခြမ်း လေဖြတ်ထားပြီး မျက်စိနှစ်ဖက်လုံး မမြင်ရှာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအဘိုးနဲ့အဘွားကို စာနာသနားတဲ့ စေတနာရှင်တွေက တတ်နိုင်သလောက် ကူညီထောက်ပံ့ပေးနေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကတော့ အဘိုးနဲ့အဘွားတို့ရဲ့အိမ်အဖောက်ခံလိုက်ရပြီး စေတနာရှင်တွေက ဆေးကုဖို့လှူဒါန်းထားတဲ့ ပိုက်ဆံတွေ အခိုးခံလိုက်ရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဘိုးနဲ့အဘွားတို့ရဲ့ရှိစုမဲ့စု ပိုက်ဆံလေးတွေထဲကမှ ငွေ (၄)သိန်းကျော်ကို ခိုးသွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အလှူရှင်တွေကို ဘာမှမတောင်းဆိုခဲ့တဲ့ အဘိုးနဲ့အဘွားကတော့ “သမီးတို့လုပ်ပေးရမှာစိုးလို့ဆိုပြီး ကိုယ့်ဟာကိုယ် စုနေကြတာလေးတွေပါသွားပြီ သမီးရယ်” ဆိုပြီး ငိုနေကြတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
အဘိုးနဲ့အဘွားကိုမှ လုပ်ရက်လိုက်လေခြင်းလို့တွေးပြီး စိတ်မကောင်းလည်းဖြစ်ရပါတယ်။
မြန်မာ့နွေဦးတော်လှန်ရေး အထိမ်းအမှတ်ဂုဏ်ပြုဘီယာကို ဂျပန်နိုင်ငံသားတစ်ဦးထုတ်လုပ်
စကားပြောရင်း ဆံပင်ညှပ်မိလို့ တစ်ခေါင်းလုံးပြောင်သွားတာကြောင့် အိမ်မပြန်ရဲတဲ့အမျိုးသား ဆံပင်ပုံတက်တူးထိုး
ထင်ရှားသည့် မြန်မာသံအဆိုတော်ကြီး ( ဦး ) ရာဇာဝင်းတင့်...
ဒီကနေ့မှာ ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့ MRTV-4 ဇာတ်လမ်းတွဲမှ...
လှူဒါန်းပေးဖို့ ဝယ်ယူထားတဲ့ အောက်စီဂျင်အိုးတွေ...
ချစ်ရတဲ့ မိသားစုတွေနဲ့ ပရိသတ်တွေကို...
Copyright © 2021. Created by သုတစွယ်စုံ.